သငျ့အပျေါ မနာလိုဖွဈနတေဲ့ လူတဈယောကျရဲ့ လက်ခဏာ (၇)ခကျြနဲ့ ဖွရှေငျးဖို့အတှကျ နညျးလမျးကောငျး - Lifestyle Myanmar
မမြှျောလငျ့ပဲ သငျ့အပျေါမနာလိုစိတျ ဖွဈသူတှကေိုတှရေ့ငျ သငျအံ့သွတတျလား? မအံ့သွပါနဲ့၊ မနာလိုစိတျဟာ သငျအယုံကွညျရဆုံး သူငယျခငျြးဆီမှာတောငျဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့တိုကျရိုကျထုတျဖျောမပွတတျတဲ့ မနာလိုစိတျကို သိအောငျရှာဖှဖေို့အတှကျ ယခုဖျောပွမယျ့ လက်ခဏာ (၇)ခကျြက သငျ့ကိုအထောကျအကူပွုပေးမှာပါ။ မနာလိုစိတျဟာ ပွုသူရောဖွဈသူရော အရမျးကိုစိတျပငျပနျးရပွီး အမုနျးဖှဲ့စတေတျတာကွောငျ့ ရှောငျရှားသငျ့တဲ့အရာတဈခုဖွဈပါတယျ။
၁။ သငျ့ရဲ့အောငျမွငျမှုတှအေတှကျ သူတို့ပြျောရှငျမှုကို မခံစားရဘူး
ပထမဆုံးသိနိုငျတဲ့လက်ခဏာက သငျ့ရဲ့အောငျမွငျမှုကို မနာလိုဖွဈတဲ့အတှကျ သူတို့ကသငျ့အောငျမွငျမှုအပျေါ ခြီးမှနျးတဲ့အခါအလှဲလှဲအမှားမှားတှေ ဖွဈတတျသလို သူတို့မကျြလုံးကိုလှဲသှားတတျပါတယျ။ တခါတလမှော အရခွေုံတဲ့ခြီးမှနျးစကားတှေ သိသိသာသာပွောတတျပွီး ဟနျဆောငျအမူအယာတှကေိုလညျး သတိထားနိုငျပါတယျ။ လူတဈယောကျရဲ့မကျြလုံးဟာ စိတျရဲ့တံခါးပေါကျဖွဈတာကွောငျ့
၂။ သငျ့ရဲ့အောငျမွငျမှုကို ဘာမှမဟုတျသလို(သေးသိမျအောငျ) ကွိုးစားမယျ
ဒါဟာလညျး ခတျေဟောငျးစိတျပညာနညျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ လူတဈယောကျမနာလိုဖွဈတဲ့အခါ သူတို့မနာလိုသူရဲ့ဂုဏျသတငျးကွီးလာတာနဲ့အမြှ သူတို့မှာလညျးပိုမိုနာကငျြခံစားရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဘာမှအရေးမကွီးသလို သေးသိမျအောငျကွိုးစားတတျကွပွီး နောကျကှယျမှာတော့ သငျနဲ့တနျးတူရညျတူဖွဈအောငျ အသအေလဲကွိုးစားပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ကိုအောကျလုံးနညျးနဲ့ မတိုကျခိုကျသမြှ
အတုယူခွငျးဟာ မနာလိုမှုရဲ့အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈကွောငျး ဖတျဖူးပါတယျ။ တဈယောကျယောကျက သငျ့ရဲ့အောငျမွငျမှုကို မနာလိုဖွဈတဲ့အခါ သငျ့ထကျကောငျးအောငျတီထှငျကွိုးစားရမယျ့အစား သငျ့ပုံစံအတိုငျး လိုကျလံတုပနတေတျတာကွောငျ့ အမွဲတမျးသငျ့ထကျနောကျကနြတေတျပါတယျ။ Wikiyeah ရဲ့အဆိုအရ “တဈယောကျယောကျက သငျ့ရဲ့လှုပျရှားမှုတှကေို copy ယူဖို့ကွိုးစားနတောဟာ သငျ့နရောမှာ သူရောကျခငျြနလေို့ပါပဲ” လို့ဆိုခဲ့ပါတယျ။
၄။ သူတို့ဟာ သငျ့ကိုအဆကျမပွတျ ယှဉျပွိုငျနမေယျ
သငျရီပို့ဈကဒျမှာ အဆငျ့တကျတဲ့အခါ တဈယောကျယောကျက အမွဲမနာလိုဖွဈပွီး သငျ့ကိုလိုကျလံယှဉျပွိုငျနတောကို စတိတျကြောငျးသားဘဝတုနျးက သငျကွုံခငျြကွုံဖူးပါလိမျ့မယျ။ ပွိုငျဆိုငျမှုဆိုတာ ရှိရမယျ့အရာဖွဈသျောလညျး အပွိုငျခံရသူမှာတော့ စိတျမသကျမသာနဲ့ အနှောကျအယှကျဖွဈရတယျလို့ ကြှနျတျောကတော့ ခံစားရပါတယျ။ မိဘတှကေိုယျတိုငျက အခွားသူတှနေဲ့ပွိုငျဆိုငျဖို့ ကွိုးစားခိုငျးတဲ့အတှကျလညျး ကလေးတှမှော မနာလိုစိတျတှေ ကိနျးအောငျးတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခွားသူကိုလိုကျမပွိုငျသငျ့ပဲ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပွနျလညျပွိုငျဆိုငျသငျ့ပွီး အရှုံကိုလကျခံနိုငျတဲ့ စိတျဓာတျမြိုးမှေးမွူသငျ့ကွောငျး အကွံပေးလိုပါတယျ။
၅။ ယဘေုယြ အဆိုးမွငျအတှေးတှေ
WikiYeah ကသူတို့ရဲ့ယခုလိုခံစားခကျြကို သငျ့အပျေါ “အကွောငျးပွခကျြ မရှိတဲ့အမုနျး” ဖွဈစတေတျတယျ လို့ဆိုခဲ့ပွီး အဆိုးမွငျမှုဟာ အဆိပျနဲ့ထပျတူကတြယျလို့ Bustle ကဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မနာလိုမှုကနေ အမုနျးတှဖှေဲ့စတေတျတဲ့အတှကျ သငျ့အောငျမွငျမှုအပျါ မနာလိုတာထကျပိုပွီး အမုနျးတှတေုံ့ပွနျတတျပါတယျ။
၆။ သငျ့ကိုအဟနျ့အတားဖွဈအောငျ တကျကွှစှာလုပျဆောငျမယျ
သငျ့ကို မနာလိုစိတျကွောငျ့ အတိတျကသငျ့ရဲ့ ရှုံးနိမျ့မှုမြားကို အဆကျမပွတျသတိပေးပွီး သငျစိတျဓာတျကအြောငျ လုပျဆောငျတတျသလို ဝဖေနျခွငျးဖွငျ့လညျး နှောကျယှကျနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အဟနျ့အတားဖွဈအောငျ ကွိုးစားခွငျးဟာလညျး မနာလိုစိတျကွောငျ့ ဖွဈလာတဲ့အရာတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
၇။ ဒီလိုကိစ်စတှေ အားလုံးကိုကြျောလှားဖို့အတှကျ
အရငျဆုံး သငျ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ရိုးသားးပှငျ့လငျးစှာ နထေိုငျပါ။ သငျ့အပျေါမှာ မနာလိုစိတျဖွဈနတေယျလို့ ခံစားမိပါက သူတို့ရဲ့စကားတှကေို ပိုမိုဂရုစိုကျနားထောငျပွီး သူတို့ရဲ့ကောငျးကှကျတှေ အောငျမွငျမှုတှကေို စိတျရငျးအမှနျနဲ့ ခြီးမှနျးပေးပါ။ တခြို့မနာလိုမှုတှေ ပျေါပေါကျလာရခွငျးဟာ မိတျဆှတှေအေပျေါအသိအမှတျမပွုမိတာကွောငျ့လညျး ဖွဈတတျပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ သူတို့အပျေါအရငျကထကျ ပိုကောငျးအောငျနဲ့ ရိုးသာားစှာဆကျဆံခွငျးဟာ သူငယျခငျြးသံယောဇဉျကို ပိုမိုခိုငျမွဲရုံသာမက တဈယောကျရဲ့အောငျမွငျမှုကို တဈယောကျကမြှဝဂေုဏျယူတတျတဲ့စိတျထားတှေ တိုးပှားလာစမှောဖွဈပါတယျ။
သင့်အပေါ် မနာလိုဖြစ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာ (၇)ချက်နဲ့ ဖြေရှင်းဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်း
မမျှော်လင့်ပဲ သင့်အပေါ်မနာလိုစိတ် ဖြစ်သူတွေကိုတွေ့ရင် သင်အံ့သြတတ်လား? မအံ့သြပါနဲ့၊ မနာလိုစိတ်ဟာ သင်အယုံကြည်ရဆုံး သူငယ်ချင်းဆီမှာတောင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်မပြတတ်တဲ့ မနာလိုစိတ်ကို သိအောင်ရှာဖွေဖို့အတွက် ယခုဖော်ပြမယ့် လက္ခဏာ (၇)ချက်က သင့်ကိုအထောက်အကူပြုပေးမှာပါ။ မနာလိုစိတ်ဟာ ပြုသူရောဖြစ်သူရော အရမ်းကိုစိတ်ပင်ပန်းရပြီး အမုန်းဖွဲ့စေတတ်တာကြောင့် ရှောင်ရှားသင့်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၁။ သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက် သူတို့ပျော်ရွင်မှုကို မခံစားရဘူး
ပထမဆုံးသိနိုင်တဲ့လက္ခဏာက သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို မနာလိုဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ကသင့်အောင်မြင်မှုအပေါ် ချီးမွန်းတဲ့အခါအလွဲလွဲအမှားမှားတွေ ဖြစ်တတ်သလို သူတို့မျက်လုံးကိုလွှဲသွားတတ်ပါတယ်။ တခါတလေမှာ အရေခြုံတဲ့ချီးမွန်းစကားတွေ သိသိသာသာပြောတတ်ပြီး ဟန်ဆောင်အမူအယာတွေကိုလည်း သတိထားနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးဟာ စိတ်ရဲ့တံခါးပေါက်ဖြစ်တာကြောင့်
၂။ သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ဘာမှမဟုတ်သလို(သေးသိမ်အောင်) ကြိုးစားမယ်
ဒါဟာလည်း ခေတ်ဟောင်းစိတ်ပညာနည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မနာလိုဖြစ်တဲ့အခါ သူတို့မနာလိုသူရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြီးလာတာနဲ့အမျှ သူတို့မှာလည်းပိုမိုနာကျင်ခံစားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာမှအရေးမကြီးသလို သေးသိမ်အောင်ကြိုးစားတတ်ကြပြီး နောက်ကွယ်မှာတော့ သင်နဲ့တန်းတူရည်တူဖြစ်အောင် အသေအလဲကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကိုအောက်လုံးနည်းနဲ့ မတိုက်ခိုက်သမျှ
အတုယူခြင်းဟာ မနာလိုမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဖတ်ဖူးပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို မနာလိုဖြစ်တဲ့အခါ သင့်ထက်ကောင်းအောင်တီထွင်ကြိုးစားရမယ့်အစား သင့်ပုံစံအတိုင်း လိုက်လံတုပနေတတ်တာကြောင့် အမြဲတမ်းသင့်ထက်နောက်ကျနေတတ်ပါတယ်။ Wikiyeah ရဲ့အဆိုအရ “တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို copy ယူဖို့ကြိုးစားနေတာဟာ သင့်နေရာမှာ သူရောက်ချင်နေလို့ပါပဲ” လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
၄။ သူတို့ဟာ သင့်ကိုအဆက်မပြတ် ယှဉ်ပြိုင်နေမယ်
သင်ရီပို့စ်ကဒ်မှာ အဆင့်တက်တဲ့အခါ တစ်ယောက်ယောက်က အမြဲမနာလိုဖြစ်ပြီး သင့်ကိုလိုက်လံယှဉ်ပြိုင်နေတာကို စတိတ်ကျောင်းသားဘဝတုန်းက သင်ကြုံချင်ကြုံဖူးပါလိမ့်မယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ ရှိရမယ့်အရာဖြစ်သော်လည်း အပြိုင်ခံရသူမှာတော့ စိတ်မသက်မသာနဲ့ အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ခံစားရပါတယ်။ မိဘတွေကိုယ်တိုင်က အခြားသူတွေနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားခိုင်းတဲ့အတွက်လည်း ကလေးတွေမှာ မနာလိုစိတ်တွေ ကိန်းအောင်းတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြားသူကိုလိုက်မပြိုင်သင့်ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်လည်ပြိုင်ဆိုင်သင့်ပြီး အရှုံကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူသင့်ကြောင်း အကြံပေးလိုပါတယ်။
၅။ ယေဘုယျ အဆိုးမြင်အတွေးတွေ
WikiYeah ကသူတို့ရဲ့ယခုလိုခံစားချက်ကို သင့်အပေါ် “အကြောင်းပြချက် မရှိတဲ့အမုန်း” ဖြစ်စေတတ်တယ် လို့ဆိုခဲ့ပြီး အဆိုးမြင်မှုဟာ အဆိပ်နဲ့ထပ်တူကျတယ်လို့ Bustle ကဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနာလိုမှုကနေ အမုန်းတွေဖွဲ့စေတတ်တဲ့အတွက် သင့်အောင်မြင်မှုအပါ် မနာလိုတာထက်ပိုပြီး အမုန်းတွေတုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်။
၆။ သင့်ကိုအဟန့်အတားဖြစ်အောင် တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်မယ်
သင့်ကို မနာလိုစိတ်ကြောင့် အတိတ်ကသင့်ရဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုများကို အဆက်မပြတ်သတိပေးပြီး သင်စိတ်ဓာတ်ကျအောင် လုပ်ဆောင်တတ်သလို ဝေဖန်ခြင်းဖြင့်လည်း နှောက်ယှက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဟန့်အတားဖြစ်အောင် ကြိုးစားခြင်းဟာလည်း မနာလိုစိတ်ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ဒီလိုကိစ္စတွေ အားလုံးကိုကျော်လွှားဖို့အတွက်
အရင်ဆုံး သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရိုးသားးပွင့်လင်းစွာ နေထိုင်ပါ။ သင့်အပေါ်မှာ မနာလိုစိတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားမိပါက သူတို့ရဲ့စကားတွေကို ပိုမိုဂရုစိုက်နားထောင်ပြီး သူတို့ရဲ့ကောင်းကွက်တွေ အောင်မြင်မှုတွေကို စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ချီးမွန်းပေးပါ။ တချို့မနာလိုမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဟာ မိတ်ဆွေတွေအပေါ်အသိအမှတ်မပြုမိတာကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့အပေါ်အရင်ကထက် ပိုကောင်းအောင်နဲ့ ရိုးသာားစွာဆက်ဆံခြင်းဟာ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ကို ပိုမိုခိုင်မြဲရုံသာမက တစ်ယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို တစ်ယောက်ကမျှဝေဂုဏ်ယူတတ်တဲ့စိတ်ထားတွေ တိုးပွားလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။